Ch 11 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 11 Luke
11:1 Ary nony fa, fony izy tao amin'ny fitoerana iray nivavaka, rehefa nitsahatra, anankiray tamin'ny mpianatra niteny taminy hoe, "Tompo ô, mampianara anay hivavaka, tahaka ny nampianaran'i Jaona ny mpianany. "
11:2 Ary hoy Izy taminy:: "Rehefa mivavaka, milaza: Ray, anie ny anaranao masina hotehirizina. Enga anie ny fanjakanao tonga.
11:3 Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay.
11:4 Ary mamelà ny helokay, satria izahay koa mamela izay rehetra meloka aminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy. "
11:5 Ary hoy Izy taminy:: "Iza moa aminareo no mana-namana, ary hankany aminy eo afovoan'ny ny alina, ka hanao aminy: Ry sakaiza, ampisambory mofo telo aho,
11:6 fa ny sakaizako efa tonga avy dia lavitra ho ahy, ary tsy manana na inona na inona izay hafahako azy. '
11:7 Ary avy ao, havaliny amin'ny filazana: 'Aza hanelingelina ahy. Mikatona ny varavarana izao, ary ny zanako, ary izaho dia am-pandriana. Tsy afaka hifoha hanome izany ho anareo. '
11:8 Nefa raha izy no maharitra amin'ny mandondòna, Lazaiko aminareo fa, na dia tsy hifoha hanome azy izany, satria izy no ho namana, nefa noho ny fitohizan'ny nanizingizina, dia hitsangana ihany ka hanome izay ilainy.
11:9 Ary noho izany dia lazaiko aminareo: Anontanio, ary dia homena anareo. Mitady, ka hahita. Knock, dia hovohana ianareo.
11:10 Fa izay rehetra mangataka, mandray. Ary na iza na iza mitady, no mahita. Ary na iza na iza mandondòna, no hovohana ho azy.
11:11 Koa dia, izay eo aminareo, raha angatahany ny rainy noho ny hanina, izy fa hanome azy vato? Ary raha angatahany hazandrano, izy fa hanome azy menarana, solon'ny hazandrano?
11:12 Na raha hangataka ny atody, dia ho hanatitra ho azy maingoka?
11:13 Noho izany, raha ianao, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho ny zanakao, tsy mainka va ny Rainareo hanome, avy any an-danitra, fanahy ny tsara ho an'ireo izay mangataka aminy?"
11:15 Fa hoy ny sasany;, "Tsy dia avy amin'i Belzeboba, ny mpitarika ny demonia, izay no amoahany ny demonia. "
11:16 Ary ny hafa, naka fanahy Azy, nitaky famantarana avy any an-danitra azy.
11:17 Fa raha nahafantatra ny eritreriny, dia hoy izy taminy: "Ho foana izay fanjakana miady an-trano dia ho lao, ary ny trano ho latsaka amin'ny trano.
11:18 Koa dia, raha Satana koa miady an-trano, ahoana no haharetan'ny fanjakany? Fa hoy ianareo: fa Belzeboba fa amoahako ny demonia.
11:19 Fa raha Indro, mamoaka demonia Belzeboba, iza kosa no mba zanakao lahy dia nanary ny faty? Noho izany, izy ireo no ho mpitsara anareo.
11:20 Koa, raha izany dia noho ny rantsan-tànan'Andriamanitra no amoahako ny demonia, dia azo antoka ny fanjakan'Andriamanitra nahazo anareo.
11:21 Raha ny mahery ny olona mitam-piadiana miaro ny fidirana, ny zavatra izay ananany any soa aman-tsara.
11:22 Fa raha matanjaka iray, tena henjana azy, efa naharesy azy, dia hanaisotra ny fiadiany rehetra, in izay nitokiany, dia mizara ny babo.
11:23 Izay tsy momba Ahy, dia manohitra Ahy. Ary izay tsy miara-mamory amiko, manahaka.
11:24 Raha fanahy maloto efa niala ny olona, dia mandeha amin'ny alalan'ny toerana karakaina, mitady fitsaharana. Ary satria tsy nahita izay, hoy izy: 'Hody any an-tranoko, avy izay lasa nandeha. '
11:25 Ary rehefa efa tonga, hitany fa voafafa madio sady voaravaka.
11:26 Ary dia mandeha izy, ary izy maka fanahy fito hafa koa tamin'ny niaraka taminy, ratsy noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra ao. Ary noho izany, ny farany ho an'ny olona hitatra am-piandohana. "
11:27 Ary nony fa, fony izy mbola niteny izany, dia nisy vehivavy anankiray avy teo amin'ny vahoaka, hanandra-peo, hoy izy taminy:, "Sambatra ny kibo izay nitondra anao sy ny nono izay ninonoanao."
11:28 Dia hoy izy:, "Eny, fa koa: sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. "
11:29 Avy eo, toy ny vahoaka dia haingana nanangona, dia nilaza hoe Izy: "Ity taranaka ity dia taranaka ratsy fanahy: dia mitady famantarana. Nefa tsy hisy famantarana homena azy, afa-tsy ny famantarana ny amin'i Jona.
11:30 Fa tahaka an'i Jona izay famantarana tamin'ny Ninivita, toy izany koa no ny Zanak'olona amin'ity taranaka ity.
11:31 Ny mpanjakavavy avy tany atsimo dia hiara-hitsangana, amin'ny andro fitsarana, miaraka amin'ny lehilahy amin'ity taranaka ity, ary izy no hanameloka azy. Fa avy tany amin'ny faran'ny tany izy hihaino ny fahendren'i Solomona. Ary indro, mihoatra noho Solomona eto.
11:32 Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana, amin'ny andro fitsarana, tamin'izany taranaka izany, ary izy ireo hanameloka azy. Fa tamin'ny nitorian'i Jona, dia nibebaka. Ary indro, mihoatra noho Jona eto.
11:33 No one lights a candle and places it in hiding, nor under a bushel basket, but upon a lampstand, ka dia izay miditra dia mety hahita ny mazava.
11:34 Your eye is the light of your body. Raha ny masonao no mahasoa, ny vatanao manontolo no ho feno fahazavana. But if it is wicked, then even your body will be darkened.
11:35 Noho izany, take care, lest the light that is within you become darkness.
11:36 Koa dia, if your entire body becomes filled with light, not having any part in darkness, then it will be entirely light, ary, like a shining lamp, it will illuminate you.”
11:37 Ary raha mbola niteny, dia nisy Fariseo nanontany azy hihinan aminy. Ary nony anatiny, dia nipetraka hihinana.
11:38 Fa ny Fariseo niteny hoe, nieritreritra tao am-pony: "Nahoana no mety ho fa mbola tsy nanasa alohan'ny sakafo?"
11:39 Ary hoy Jehovah taminy: "Madio ianareo, ry Farisianina ankehitriny izay ivelan'ny kapoaka sy ny lovia, Fa inona no ao anatiny ny anareo dia feno fandrobana sy faharatsiana.
11:40 Adala! Fa moa tsy Izay nanao izay ivelany, tokoa koa ao anatiny ho zava-?
11:41 Na izany aza tena, manome izay ambony toy ny fiantrana, ary indro, ny zavatra rehetra dia madio ho anareo.
11:42 Fa lozanareo, Fariseo! Fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny rota ary izay anana famboly rehetra, fa ianao tsy miraharaha fitsarana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Fa izany teny izany no tokony ho nataonareo, tsy omitting ny hafa.
11:43 Lozanareo, Fariseo! Fa tia ny voalohany aloha ao amin'ny synagoga, sy ny fiarahabana any an-tsena.
11:44 Lozanareo! Fa ianareo dia tahaka ny fasana izay tsy tsikaritra, ka ny olona manitsaka azy kanefa tsy tonga saina izany. "
11:45 Ary ny anankiray tamin'ny mpahay lalàna, ho setrin'ny, hoy izy taminy:, "Mpampianatra, amin'ny hoe izany, ianao mitondra faniratsirana hamely anay koa. "
11:46 Dia hoy izy:: "Ary Lozanareo manam-pahaizana manokana ao amin'ny lalàna! Fa milanja ny olona any amin'ny enta-mavesatra izay tsy afaka ny hitondra, fa ny tenanareo tsy mikasika ny lanjan'ny amin'ny dia iray amin'ny rantsan-tananareo.
11:47 Lozanareo, izay manao ny fasan'ny mpaminany, raha mbola ny razanareo no namono azy!
11:48 Mazava, ianareo ary mijoro ho vavolombelona fa manaiky ny zavatra nataon'ny razanareo, satria na dia izy no namono azy, ianao manao ny rarivatom-sepulchers.
11:49 Ary noho izany koa, ny fahendren'Andriamanitra hoe:: , Dia halefako any ireo Mpaminany sy Apôstôly, ary ny sasany amin'ireo dia hovonoiny na hanenjika,
11:50 ka ny ran'ny mpaminany rehetra, izay efa nalatsaka hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, dia mety ho voampanga hanohitra ity taranaka ity:
11:51 dia hatramin'ny ran'i Abela, Fa na dia hatramin'ny ran'i Zakaria, izay novonoina teo anelanelan'ny alitara sy ny tempoly. Ka lazaiko aminareo: dia ho hadinina amin'ity taranaka ity!
11:52 Lozanareo, manam-pahaizana manokana ao amin'ny lalàna! Fa nalainareo ny fanalahidin'ny fahalalana. Ianareo tsy miditra, ary izay te-hiditra, dia ho voarara. "
11:53 Avy eo, raha mbola nilaza izany taminy, ny Fariseo sy ny mpahay lalàna nanomboka manantitrantitra mafy izy hitandrina ny vavany momba ny zavatra maro.
11:54 Ary miandry ny otrika azy, dia nitady zavatra avy amin'ny vavany mba hisambotra azy, mba niampanga azy.